Dọrọ ndị na-eso ụzọ, Azụla ha | Martech Zone
Ọ dịghị mfe ịzụlite nnukwu ndị na-eso ụzọ na Twitter. Easiestzọ kachasị mfe bụ ịghọ aghụghọ na imefu ego gị na-azụ ọtụtụ puku ndị na-eso ụzọ site na otu n’ime ndị a “azụmahịa” nke na-enye ụdị ọrụ ahụ.
Kedu ihe a ga-enweta site na ịzụta ndị na-eso ụzọ? Yabụ ma ọ bụrụ na ịnwere ụmụazụ 15,000 na-enweghị mmasị na azụmaahịa gị yana ozi ị na-ezi? Yingzụta ndị na-eso ụzọ anaghị arụ ọrụ, n'ihi na ịnwe nnukwu ihe na Twitter agaghị emetụta azụmahịa gị belụsọ ma ndị na-eso ụzọ gị na-eche ihe ị na-tweet.
Site n'ikike nke WikiCommons
Anyị niile ahụla mmetụta nke ịnwe nnukwu ihe na Twitter; naanị jụọ ụgbọ elu Southwest. Ihe mere ụmụ okorobịa ji amasị Kevin Smith nwere ike mepụta nnukwu mkpọtụ na Twitter n'ihi na ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ya nwere mmasị n'ihe ọ na-ekwu.
Azụmaahịa nwere ike ịnwe otu ụdị ịgbaso, mana ọ na-aka sie ike ma na-ewe oge. Nke mbụ, ọ na-ewe ọdịnaya. Mepụta usoro maka ibe gị, yana ihe ịchọrọ itinye na ya. Zipu ozi ndi bara uru nye ndi n’eme gi. Ọ bụrụ na ị nọ na mkpọsa ahụ tweet banyere azụmahịa na Kupọns. Tweet banyere ihe omume ga-amasị ndị na-ege gị ntị.
Na-esote, soro ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị metụtara azụmahịa gị. Y’oburu n’inwe akwa jeans boutique, soro ndi na-ese ihe na ndi isi ulo oru ejiji. Ndị na-ege gị ntị echere ga-eso otu ibe, ha ga-achọta gị site na onye ị na-eso.
Nke ikpe azu, nwee ndidi. Social media dị ka ịkụ azụ. Keep na-atụba azụ n'ebe ahụ, otu ụbọchị ị ga-amalite ịgbapụ ha dị ka ndị nzuzu. Na-arụsi ọrụ ike, na-adị ngwa, ma mara ihe gbasara ọdịnaya gị na saịtị gị ga-eto.
Tags: ịzụ ụmụazụ
Gingde blọgụ na South Africa
Aug 23, 2010 na 6:23 PM
Dị ka ọ ga-amasị m ikwenye, ọ dị nwute na nnukwu ọnụọgụ buru ibu ma bụrụ akara nke ikike. M ga-ama gị aka ịnwale ịzụrụ otu ụlọ ọrụ, wee jiri nke ọzọ too organic. You'll ga-ahụ na otu nwere ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ga-eto ngwa ngwa ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ihe dị iche ma ha abụghị. Ndị mmadụ na-amasị belong na ibu nọmba ndị mara mma.
Aug 23, 2010 na 6:34 PM
Anụla m ma - na-elekọta mmadụ; ọ bụ mgbasa ozi mmekọrịta na naanị tweet banyere azụmahịa gị - ma ọ bụ echere m na ị nwere ike ịnweta akaụntụ abụọ. Enweghị m ike ijikọ otu, yabụ ebee ka ịzụta ndị na-eso ụzọ 🙂
Aug 24, 2010 na 10:14 PM
Ọ bụrụ na ị ga-azụta ndị na-ege ntị maka akaụntụ Twitter ma ọ bụ ikpo okwu ọ bụla, enwere ụzọ ka mma iji mee ya karịa ịzụrụ ndị na-eso ụzọ ya n'ụzọ nkịtị - enwere ọtụtụ ntanetị mgbasa ozi nwere ike ịnapụta ọkwa dị ịtụnanya nke ịwa ahụ. ndị na-ege ntị nwere ike ịchọta ọdịnaya gị dị mkpa - yana ọyableụ-site na ichebe omume, na-emegharị, wdg. nke na-enwe mmetụta na nghọta na mmata na ụzọ okike iji nweta mgbasa ozi bara ụba nke na-akwụ ụgwọ gafere nke ọma karịa pịa site na.
Echiche niile nke ịzụta ndị na-eso ụzọ twitter dị mma ma ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ na-aza azịza nke na-ere nnweta ma na-egwu egwuregwu nọmba. Echiche jọgburu onwe ya maka ụlọ ọrụ ọ bụla na-anwa ịkọwa ọdịiche na gbakwunye uru na ika. Nke a abụghị ihe dị iche karịa ịzụrụ ndepụta email, ma ọ bụ ịzụta ndepụta ozi ahazi. Ọ ka bụ isi na spam na akwụkwọ m, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na mmadụ ekwenye ịkwụ ụgwọ maka agbakwunye. Yingzụta ndị na-eso ụzọ anaghị enwe isi - ọ bụghị naanị ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ, ọ bụ maka obi na uche na iguzosi ike n'ihe na mmekọrịta yana n'ezie, ijikọ ụdị na obere akpa na ihe dị n'ime ha.
Enwere m mmasị na opt-in ụkpụrụ nke inweta ndị na-eso ụzọ ma anyị na-ejikarị ọrụ ndị na-enye nke a kpọsaa. Isi okwu m, agbanyeghị na iru ala bụ na ndị mmadụ amachaghị emme. Ọnụ ọgụgụ dị ala na-agbanyụ ndị mmadụ ma na-egosi na ị bụghị onye nwere ikike. Ọnụ ọgụgụ dị elu nwere ike ịnweta gị ngwa ngwa traction.
N’aka ozo, izu ndi na-eso uzo apụtachaghi na ị na-azụta obi na uche ha. Ihe ị na-azụ bụ ọnụ ọgụgụ dị elu nke ukwuu ka ndị nwere obi na uche wee dọta ya.